Accueil > Gazetin'ny nosy > Governemanta Ntsay : Matahotra ny sezany ny maro amin’ireo minisitra
Vita iny ny fifidianana solombava. Efa tafatsangana ny Antenimierampirenena vaovao, satria ny fahavitan’ny fifidianana an’ireo mandrafitra ny birao maharitra no manome endrika ny fahafenoan’ny fepetra maha-andrim-panjakana ity Antenimierampirenena ity.
Raha ny toetsaina pôlitika manaja ny fitsipika moraly ara-pôlitika dia mametra-pialana avy hatrany ny governemanta amperin’asa raha vao mivoaka ara-pomba ofisialy (Hcc) ny voka-pifidianana solombava. Tsy ilàna andininy voasoritry ny Lalàmpanorenana na rijantenin-dalana izany fa fahatsapana ny rariny ara-pôlitika. Misy mantsy ny milaza fa “tsy voalazan’ny Lalàmpanorenana ny tsy maintsy ametrahan’ny governemanta fialana raha vao vita ny fifidianana solombava”. Rariny ara-pôlitika na “légitimité politique” izay azo afototra amin’ny kolotsaina sy môraly pôlitika izany. Tsy misy valaka amin’ny hoe “mametra-pialana ny governemanta raha vao voafidy ny filohampirenena vaovao”. Tsy misy Lalàmpanorenana na rijantenin-dalàna mamaritra an’izany koa.
Ny antony dia tsotra. Raha ny lojikany dia ny safidin’ny filohampirenena tamin’ny fotoana nanendreny an’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta no nifotoran’ny fijoroan’iny governemanta iny ka rehefa miova ny filohampirenena dia manara-davahana an’izay ny fametraham-pialan’ilay governemanta. Anjaran’ilay filohampirenena vaovao avy eio ny manipika hoe “voaray ny fametraham-pialanareo governemanta saingy mandra-pijoron’ny governemanta vaovao dia manohy manatanteraka ny raharaha andavandron’ny governemanta ianareo”.
Tsy misy valaka amin’izany ny fisian’ny depiote vaovao mandrafitra ny Antenimierampirenena. Satria fifandanjan-kery hafa no teo anivon’ny Antenimierampirenena tamin’ny fotoana nandrafetana ny governemanta amperin’asa ka rehefa Antenimierampirenena vaovao arafitra ny solombava hafa no ao dia ny fametraham-pialan’ny governemanta amperin’asa no rariny pôlitika voalohany tokony hibaiko ny fihetsika amam-pitondran-tenan’ilay governemanta. Eny, na ny maro an’isa teo aloha ihany aza no mbola mamaritra ny maro an’isa vaovao.
Ka amin’izao fotoana, tsy ny rariny pôlitika intsony no hibaiko ny mety hialan’ny mpikambana sasany na izy rehetra na ny iray sy roa ao amin’ny governemanta Ntsay Christian satria niziriziry tsy nety nametra-pialana izy ireo na voafidy aza ny solombava vaovao fa hoe “tsy voafaritry ny Lalàmpanorenana izany”, dia sarotra ho azy ireo ny tsy hihetsiketsika satria tapitra ny enim-bolana voalohany naha-minisitra azy ireo.
Ny filohampirenena mantsy no efa nanipika hatrany amboalohany fa “hanao tombana momba ny andraikitr’ireo minisitra ireo isika afaka enim-bolana dia ho hita eo ny nahomby sy ny tsy nahovoka”.
Marina fa maro amin’ny mpanara-maso no manana ny fomba fanombanany ny asa nataon’ireo minisitra isanisany ao anatin’ny governemanta ankehitriny. Manana ny fomba fijeriny koa ny filohampirenena. Na misy aza ny mihevitra fa misy minisitra vitsivitsy tsy dia hita loatra ny nafitsony nandritra izay enim-bolana voalohany izay, dia maro ny mahatsikaritra fa mety tsy hanova minisitra iray akory ny filoha, ary na ny ministera banga tsy manana minisitra aza, toy ny ao amin’ny ministeran’ny Mponina sy ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena, dia mety haverina hotendrena minisitra amin’ireo izy mirahavavy teo aloha, izay tsy maintsy nametra-pialana satria nirotsaka nofidiana solombava, ary samy lany (Irma Naharimamy sy Volahaingo Marie Thérese).
Na izany na tsy izany, tsinjon’ny mpanara-baovao koa fa manahy ihany ny handao ny toerany ireo minisitra amin’izao tombana hataon’ny filohampirenena izao ka mihetsiketsika aoka izany, mampiseho fa miasa sy miroso amin’ny fahombiazana (???). Dia hojeren’ny mpiara-belona eo ny ho fivoaran’izany e ! Rainisoa